Ny AASHTO dia miantsona / miloko fanangonana glasy ho an'ny fanondroana lalana China Manufacturer
Home > Products > Hazo fanondronam-bolo > Ny AASHTO dia miantsona / miloko fanangonana glasy ho an&#39;ny fanondroana lalana
Model No.: AASHTO M247 TYPE I, II, III
AASHTO M247 TYPE II fantsom-baravarankely
Ireo kofehy fitaratra mitovy amin'ny fampiasana ny arabe an-dalambe sy ny lalan'ny fifamoivoizana.
Mifanaraka amin'ny fepetra federaly sy fanjakana rehetra.
Miara-mifangaro (ho an'ny soratra) na midina (manao fandinihana) fampiharana.
Ny isa dia 20-325 US Mesh, 45-850 Microns, Roundness> = 70%.
Ny endriky ny refractive dia> = 1.51.
Andian-tsakafo hafa manomeza:
Azonao atao koa ny mampifanaraka araka ny fangatahanao manokana.